ပရီးမီးယားလိဂျ သမိုငျး တလြှောကျ စညျးကမျးပိုငျး အားအနညျးဆုံး အသငျး က ဘယျ အသငျးလဲ ? - SPORTS MYANMAR
ပရီးမီးယားလိဂျ သမိုငျး တလြှောကျ စညျးကမျးပိုငျး အားအနညျးဆုံး အသငျး က ဘယျ အသငျးလဲ ?
၁၉၉၂ – ၉၃ ဘောလုံး ရာသီ ကနေ စပွီး အင်ျဂလနျ ပထမတနျး ခနျြပီယံရှဈ ကို ပရီးမီးယားလိဂျ လို့ စတငျ ချေါဝျေါ သမုတျ လာတာ အခု အခါမှာ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘောလုံး ရာသီ ကို ရောကျရှိ လို့ လာပါတယျ ။ ယငျးကာလ အတှငျး မှာ ဘယျ အသငျး က အသနျ့ရှငျးဆုံး အသငျး ၊ ဘယျ အသငျး က အညဈပတျဆုံး အသငျး ဆိုတာ တခကျြ ကွညျ့ကွညျ့ရအောငျပါ … ။
ပရီးမီးယားလိဂျ လို့ ချေါတှငျ လာကတညျးက အခု အခြိနျ ထိ တနျးမဆငျးသေးတဲ့ အသငျး ၆ သငျး ရှိပါတယျ ။ အဲ့ဒီ အသငျး တှကေတော့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ၊ အာဆငျနယျ ၊ ခယျြလျဆီး ၊ လီဗာပူး ၊ တော့တငျဟမျ နဲ့ အဲဗာတနျ အသငျး တှေ ဖွဈကွပါတယျ ။ ၄ငျးတို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ ကို အမြားဆုံး ကစားထားကွတာ ဖွဈပါတယျ ။
ထို ၆ သငျးထဲမှာ အဝါကတျ ၊ အနီကတျ အပွသခံရဆုံး အသငျး က ခယျြလျဆီး အသငျး ဖွဈပွီး ပှဲပေါငျး ၁၀၄၆ မှာ ပမျြးမြှ booking point ၁၇.၅၅ ရှိနပေါတယျ ။ ဒါဟာ နောကျဆုံး ၃ရာသီ အတှငျး လကျရှိ ပရီးမီးယားလိဂျ အသငျး ၂၀ ထဲမှာလညျး အမြားဆုံး ပမာဏ ဖွဈပါတယျ ။ ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ အနောကျ မှာတော့ အဲဗာတနျ က ၁၇.၄၄ နဲ့ ရပျတညျ နပေါတယျ ။
အဲ့ဒီနောကျ အာဆငျနယျ ၊ တော့တငျဟမျ ၊ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ၊ လီဗာပူး အသငျး တို့က အစဉျလိုကျ ရပျတညျ နပေါတယျ ။ လကျရှိ ပရီးမီးယားလိဂျ အသငျး ၂၀ အနအေထား နဲ့ ပွောရရငျ နောကျဆုံး ၃ရာသီ မှာ လီဗာပူး အသငျး က အဝါကတျ ၊ အနီကတျ ပွသ ခံရမှု အနညျးဆုံး အသငျး အဖွဈ ရပျတညျ နပေါတယျ ။
ပှဲ အရအေတှကျ အမြားဆုံး မဟုတျ တဲ့ အနအေထား မှာတော့ ဒါဘီ အသငျး ဟာ ပမျြးမြှ အဝါကတျ ၊ အနီကတျ အပွသခံရတာ အမြားဆုံး အသငျး ဖွဈပါတယျ ။ စုစုပေါငျး ပရီးမီးယားလိဂျ ၂၆၆ ပှဲ ကစားထားရာ ပမျြးမြှ ၂၁.၈၇ booking point ရှိနပေါတယျ ။ ၄ငျရဲ့ အနောကျ မှာတော့ ဆနျးဒါးလနျး အသငျး က ၆၀၈ ပှဲကစား ခဲ့ရာ ပမျြးမြှ booking point ၂၀.၅၆ မှတျ နဲ့ ဒုတိယ နရော မှာ ရပျတညျ နပေါတယျ ။
ဆနျးဒါးလနျး ရဲ့ အနောကျမှာ ဟူးလျစီးတီး ၊ ဝကျဖို့ဒျ ၊ ဘနျစလေ စတဲ့ အသငျး တှကေ အစဉျလိုကျ ရပျတညျ နပေါတယျ ။ ပှဲအမြားဆုံး ကစားထားတဲ့ အသငျး တှေ ထဲမှာ ပမျြးမြှ Booking point အမြားဆုံး ရထားတဲ့ ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ အမှတျ အလိုကျ တှကျတဲ့ နရော မှာတော့ အဆငျ့ ၁၇ နရော မှာ ရပျတညျ နပေါတယျ ။
Spreadex ရဲ့ ဖျောပွခကျြ အရ အမှတျတှကျတဲ့ နညျးစနဈ ကတော့ အဝါကတျ ၁ ကတျ ကို ၁၀မှတျ ၊ အနီကတျ တကတျ ကို ၂၅ မှတျ နဲ့ ထညျ့တှကျ ထားတာ ဖွဈတယျ လို့ သိရပါတယျ ။ ခယျြလျဆီး အသငျး အတှကျ က အားလုံး စုစုပေါငျး အမှတျ ၁၈၃၆၀ နဲ့ အခွား ထိပျသီး ပွိုငျဖကျ တှထေကျ အမှတျမြားကာ ပရီးမီးယားလိဂျ သမိုငျး တလြှောကျ ရဲ့ စညျးကမျးပိုငျး အညံ့ဆုံး အသငျး အဖွဈ ရပျတညျလကျြ ရှိနပေါတယျ ။
ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်း တလျှောက် စည်းကမ်းပိုင်း အားအနည်းဆုံး အသင်း က ဘယ် အသင်းလဲ ?
၁၉၉၂ – ၉၃ ဘောလုံး ရာသီ ကနေ စပြီး အင်္ဂလန် ပထမတန်း ချန်ပီယံရှစ် ကို ပရီးမီးယားလိဂ် လို့ စတင် ခေါ်ဝေါ် သမုတ် လာတာ အခု အခါမှာ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘောလုံး ရာသီ ကို ရောက်ရှိ လို့ လာပါတယ် ။ ယင်းကာလ အတွင်း မှာ ဘယ် အသင်း က အသန့်ရှင်းဆုံး အသင်း ၊ ဘယ် အသင်း က အညစ်ပတ်ဆုံး အသင်း ဆိုတာ တချက် ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ … ။
ပရီးမီးယားလိဂ် လို့ ခေါ်တွင် လာကတည်းက အခု အချိန် ထိ တန်းမဆင်းသေးတဲ့ အသင်း ၆ သင်း ရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒီ အသင်း တွေကတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ၊ အာဆင်နယ် ၊ ချယ်လ်ဆီး ၊ လီဗာပူး ၊ တော့တင်ဟမ် နဲ့ အဲဗာတန် အသင်း တွေ ဖြစ်ကြပါတယ် ။ ၄င်းတို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ကို အများဆုံး ကစားထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ထို ၆ သင်းထဲမှာ အဝါကတ် ၊ အနီကတ် အပြသခံရဆုံး အသင်း က ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဖြစ်ပြီး ပွဲပေါင်း ၁၀၄၆ မှာ ပျမ်းမျှ booking point ၁၇.၅၅ ရှိနေပါတယ် ။ ဒါဟာ နောက်ဆုံး ၃ရာသီ အတွင်း လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်း ၂၀ ထဲမှာလည်း အများဆုံး ပမာဏ ဖြစ်ပါတယ် ။ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အနောက် မှာတော့ အဲဗာတန် က ၁၇.၄၄ နဲ့ ရပ်တည် နေပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် အာဆင်နယ် ၊ တော့တင်ဟမ် ၊ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ၊ လီဗာပူး အသင်း တို့က အစဉ်လိုက် ရပ်တည် နေပါတယ် ။ လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်း ၂၀ အနေအထား နဲ့ ပြောရရင် နောက်ဆုံး ၃ရာသီ မှာ လီဗာပူး အသင်း က အဝါကတ် ၊ အနီကတ် ပြသ ခံရမှု အနည်းဆုံး အသင်း အဖြစ် ရပ်တည် နေပါတယ် ။
ပွဲ အရေအတွက် အများဆုံး မဟုတ် တဲ့ အနေအထား မှာတော့ ဒါဘီ အသင်း ဟာ ပျမ်းမျှ အဝါကတ် ၊ အနီကတ် အပြသခံရတာ အများဆုံး အသင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ စုစုပေါင်း ပရီးမီးယားလိဂ် ၂၆၆ ပွဲ ကစားထားရာ ပျမ်းမျှ ၂၁.၈၇ booking point ရှိနေပါတယ် ။ ၄င်ရဲ့ အနောက် မှာတော့ ဆန်းဒါးလန်း အသင်း က ၆၀၈ ပွဲကစား ခဲ့ရာ ပျမ်းမျှ booking point ၂၀.၅၆ မှတ် နဲ့ ဒုတိယ နေရာ မှာ ရပ်တည် နေပါတယ် ။
ဆန်းဒါးလန်း ရဲ့ အနောက်မှာ ဟူးလ်စီးတီး ၊ ဝက်ဖို့ဒ် ၊ ဘန်စလေ စတဲ့ အသင်း တွေက အစဉ်လိုက် ရပ်တည် နေပါတယ် ။ ပွဲအများဆုံး ကစားထားတဲ့ အသင်း တွေ ထဲမှာ ပျမ်းမျှ Booking point အများဆုံး ရထားတဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ အမှတ် အလိုက် တွက်တဲ့ နေရာ မှာတော့ အဆင့် ၁၇ နေရာ မှာ ရပ်တည် နေပါတယ် ။
Spreadex ရဲ့ ဖော်ပြချက် အရ အမှတ်တွက်တဲ့ နည်းစနစ် ကတော့ အဝါကတ် ၁ ကတ် ကို ၁၀မှတ် ၊ အနီကတ် တကတ် ကို ၂၅ မှတ် နဲ့ ထည့်တွက် ထားတာ ဖြစ်တယ် လို့ သိရပါတယ် ။ ချယ်လ်ဆီး အသင်း အတွက် က အားလုံး စုစုပေါင်း အမှတ် ၁၈၃၆၀ နဲ့ အခြား ထိပ်သီး ပြိုင်ဖက် တွေထက် အမှတ်များကာ ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်း တလျှောက် ရဲ့ စည်းကမ်းပိုင်း အညံ့ဆုံး အသင်း အဖြစ် ရပ်တည်လျက် ရှိနေပါတယ် ။